Nke a nwere ike ịgbanwe ihe niile. Dị ka gị na ụlọ ọrụ chọrọ idokwa ikwu azum, na-ejikọ azum, n'ọkwá, wdg… ọ na-egosi ihe niile ọ nwere ike ịbụ a mpụ omume ma ọ bụrụ na ọ na-emezu n'ime United States na-adịghị igosipụta a njikọ dị n'etiti ụlọ ọrụ na ndị ahịa.
ga- Ndị ọkwọ ụgbọ ala Nascar kwesiri ịkpọsa ndị na-akwado ha na ajụjụ ọ bụla ọ bụla n'ihi na ha na-eyi okpu ma ọ bụ na-a aụ soda. Hà ga-etinye ngosi dị n'okpuru mpempe akwụkwọ mmado ọ bụla?
ga- Kọmitii na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị (PAC) ga-ekwuwapụta na okwu ọ bụla na saịtị ọ bụla na ha bụ akụkụ nke nzukọ nwere mmekọrịta akwụ ụgwọ na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị? Kedu maka mgbe ha zipụrụ ọtụtụ puku ndị otu ka ha gaa zaa ntuli aka na ntanetị?
M dere a ịde blọgụ akwụkwọ ebe m tinyere ọtụtụ ndị ahịa m na ndị mgbere (gụnyere Alerding Castor) dị ka ihe atụ n'akwụkwọ. M ga-enweta ntaramahụhụ n'ihi na egosighi m na anyị nwere, ma ọ bụ otu oge, inwe mmekọrịta azụmahịa?
ga- ngwaahịa ozioma na nzukọ dị mkpa iyi baajị ma ọ bụ okpu nke na-ekwu na ha ga-ekwu maka ndị ahịa ha, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha?
Aghọtara m na iwu na-anwa igbochi ya aghụghọ omume, mana nsogbu a bụ na mmadụ m dum na intaneti, akaụntụ twitter m, ọnọdụ Facebook m, weebụsaịtị m, yana ederede m niile dabere na mmekọrịta mụ na azụmaahịa. Ego ndị ụlọ ọrụ m na-akpata dabere n’ahịa ndị ahịa m na-ere. Abụ m onye nkwado kwụrụ ụgwọ maka ha - awa iri abụọ na anọ n'ụbọchị na ụbọchị asaa n'izu. Adịghị m na-agbalị iduhie onye ọ bụla… ma m na-agbalị ka iwelie ikike, mmata, na ozi ọma na nnọchite nke m ahịa. Kedu onye ọzọ m ga-ekwu maka ya?!
Tags: alerding castordavid castorngosiftciwu na-akwadoghịọkàiwuiwuahia ahia